Safal Tips Archives - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips
हामी सबै आत्मनिर्भर रहेर पनि परनिर्भर छौं । साथी सर्कल, परिवार, व्यवसायिक सम्बन्धहरु, सामाजिक सम्बन्धहरुले हामीलाई हाम्रो जीवनका अनेक परिस्थितिहरुमा अगाडी बढ्न...
असफल भएको समयमा पनि सकारात्मक सोंचलाई कसरी जोगाइराख्ने ?
असफल हुनासाथ हामीले जिन्दगी सकियो भन्ने सोंच्छौँ । तर सफल भएका व्यक्तिहरु कसैले पनि एकै पटक सफलता हासिल गरेका होइनन । असफलताले...
चिन्तित अवस्थामा आफूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने ?
नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ छ, " चिन्ता भनेको चिताको बाटो हो । " जिन्दगीमा अनेक परिस्थिति आउँछन् , जहाँ हामी आफैलाई बिर्सेर...
123...2828 पृष्ठ 1